Xaflad lagu tageerayo takuleeynta cidamada qaranka ka dhacday magalada Gothenbourg de wadanka Sweden. – Balcad.com Teyteyleey
Xaflad lagu tageerayo takuleeynta cidamada qaranka ka dhacday magalada Gothenbourg de wadanka Sweden.
Xafladaas oo aay soo awaabuleen gudi isku xilqaamay. Shirkaas ayaa waxaa looga hadlay sidii gacan logga geeysan laha takuleeynta cidamada qaranka.
Waxaa dadkii xafladaas isugu yimid ka muuqday farxad waxaayna muujiyeen ineey ka goantahay ineey bixiyaan takuleeynta ciidamada naftooda u huray ineey difacaan dhulkooda hooyo.
Kasoo qeebgalayasha oo isugu jiray rag, dumar iyo dhalinyaro ayaa waxaa maanso qiiro badan oo ka hadleeysa xaqa uu leeyahay cidanka iyo wajibaadka saaran abwaan Khalif Xayir.
Kulanka ayaa waxaa qadka telefonka kala soo qeeb qaatay Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo madaxweyne Farmaajo umagacaaway gudomiye kuxigeenka takuleeynta cidanka Qaranka iyo wasirka wasarada gashan dhiga mudane Abdirashid Abdulahi Mohamed oo si aad ugn nuux nuuxsadeen muhimada aay leedahay in shacabka Soomaaliyeed aay u istaagan takuleeynta cidamada qaranka.
Sheikh Nuur oo ka hadlaayay amini daro darteed iyo cabsi waxaay kalifta in mowadiniin badan oo Sheikh Nuur ka mid yahay usan ku tukan karin masajid yada ama usan joogi karin gurigiisa. wasirka waxaa uu qayaxay in dowladu aay ka goantahay ineey amni leeysku haleen karo Kasoo dabaasho guud ahaan wadanka iyo ineey dib ugu soo celiso xoriyadooda mowadiniin Soomaaliyeed ee ku xiran wadamo dibada ah.
Waxaa Sheikh Nuur Baaruud iyo wasirka gashandhiga mudane cabdirashid Abdulahi Mohamed uga mahad celiyeen shacabka Soomaaliyeed ee qurba joogta ee marwalbo taageera walalahood sidii aay u cawiyeen xiligii abaarta sameeysay wadanaka oo dhan waxaayna ka codsadeen ineey sii xoojiyaan midnimada.
Waxaa gabo gabadii leeysku afgartay in leeyskugu yimaado kulan balaaran bisha agoost dhex bartamaheed. Kulanka ayaa waxaa kheeyb ka aha walaalaha jaliyada Soomaaliyeed ee Borås oo runti aad iyo aad marwalba u taageera wadanka hooyo. Waxaa gudiga qabanqabada aay u mahad celiyeen bahda saxafada Soomaaliweyn radio & TV Xuseen Calasoow, Ikran Ali iyo Ahmed Afrax iyo Kalsan TV Ibrahim Jama oo marwalba utaagan ineey shacabweeynaha Soomaaliyeed usoo tebiyaan waxa jira.
The post Xaflad lagu tageerayo takuleeynta cidamada qaranka ka dhacday magalada Gothenbourg de wadanka Sweden. appeared first on Ilwareed Online.
Mooshin ka dhanka ah xukumada Khayre yaawada?